WordPress Plugin: PostPost (Yakagadziridzwa) | Martech Zone
WordPress Plugin: PostPost (Yakagadziridzwa)
Svondo, Kukadzi 18, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
update: Iyi Plugin yakaendeswa kune yangu Mapurojekiti peji uye yakagadziridzwa ku:
PostPost - Iyo WordPress Plugin yekuisa zvakagadziriswa zvemukati zvisati uye mushure mega posta mune yako saiti kana yako yekudya.
Ini ndakanyora iyi plugin mushure mekuyedza kuwedzera kushambadzira kune yangu yekudya ndega uye nekugumbuka. Ndiyo yekutanga 'yakazara' plugin asi ini ndinofunga yakanyorwa zvakachena kwazvo. Ini ndakanyatso kufunga nezve iyo Plugin dhizaini inoshandisa Pfungwa Dzakareruka 'Copyright Plugin. Ini ndakashandisa kuvaka kwe Ryan Duff's WP Yekubatanidza Fomu plugin kuti inyore zvakanyanya kuvaka. Iyo yakanakisa plugin kurodha pasi uye kudzidza kudzidza kunyora plugin nekuti iri nyore.
WordPress: Post WordPress Inoburitsa Otomatiki
Kukadzi 17, 2007 na2: 26 PM
Doug - Izvi zvinotyisa. Ndanga ndichiverengera kunyora zvangu ndichitarisira kuti mumwe munhu azviite. Ini handisi kushambadzira shambadziro, asi ndiri kuronga kuve nechikafu chete zvinhu zvinouya. Izvi zvichave zvakakwana. Ndatenda!
Kukadzi 17, 2007 na3: 44 PM
Ndatenda Tony! Ndiri kuzoisimudzira mumavhiki mashoma anotevera ndine Admin interface. Ndiri mutsva pakunyora maPlagi saka zviri kunonoka kuenda.
Kukadzi 18, 2007 na6: 47 PM
Ingori FYI, ini ndakanyorazve plugin uye ndakatumira zvakare. Iyo yekutanga yaive yakanaka, asi iyo yekuvandudza ine yakazara admin interface pairi! Ini ndatumirazve iyi posvo futi.
Kukadzi 18, 2007 na6: 51 PM
Kutonhora. Mumwe munhu anga aine vhiki inonakidza uye inobudirira 😉
Kukadzi 18, 2007 na6: 55 PM
Zvakanga zviri! Icho chaive chimwe chezvinangwa zvangu muna 2007 kunyora yangu yega plugin kubva pakutanga. Ndakagadzirisa mamwe plugins evamwe vanhu asi iyi ndiyo yekutanga yandatora. Izvozvi yave kushandiswa kushandira maGoogle Ads angu pasi peimwe posvo pamwe neyangu RSS Feed kushambadzira.
Zvinhu zvinonakidza… uye zvibodzwa zviviri pasi! (Mumwe wevamwe vangu aifanira kupinda muTop 2 paTechnorati… ndakarova izvozvi asi zvaive nerubatsiro rwema "Z-List" mazhinji, saka ini ndinomirira iwo matanho kuti azvimisidzire ndisati ndapemberera) .
Kukadzi 18, 2007 na7: 20 PM
DOH! Ndakaona zvakare kuti yaitaridzika pamapeji epeji… saka ini ndakangoigadzirisa ndikaburitsa 1.1.1. Ini ndinofunga ndiyo yekumhanyisa rekodhi rekodhi! Iye zvino unogona zvakare kugadzirisa zvirimo pamberi nepashure peji.
Kukadzi 19, 2007 na2: 08 PM
Kutenda neizvi, imwe pfungwa inokurumidza iwe kunyange - ndinotenda Google AdSense inoisa muganho we4 (5?) Kushambadza pane peji, saka kana iwe ukawedzera AdSense kodhi mushure / pamberi pese positi, uye une sarudzo yakatarwa inopfuura mashanu Zvinyorwa zvinoonekwa pane peji, panogona kunge paine nyaya.
Hazvirevi sekunyunyuta, sezvo ini ndisingatozvishandise zvakare (kumisa account yangu:
Kukadzi 19, 2007 na5: 58 PM
Ndiri kuenda kutarisa kuna iye Chris! Ndiri kuyedza 'kutamba' nepfungwa yekusarongeka, uye nth kuiswa kweizvi. Zvakare, ndiri kuenda kunoshanda mumusoro uye tsoka tsoka. Iyo plugin yakanyorwa mushe mushe (Ini 'ndakakwereta' zvimwe zvivakwa kubva kune mamwe akanyorwa zvakanaka plugins) saka ndichaenderera mberi nekukuwedzera.
Feb 20, 2007 at 12:47 PM
Zvakanaka, ndatenda neruzivo, uye nekukurumidza mhinduro, unokosheswa.
Handina chokwadi kuti sei Peji Yemutemo inofanira kuitwa. Iyo inotaura kuti panogona kuve anosvika maviri ma ads pachigadzirwa. Izvo zvinonakidza… semuenzaniso, Kana ndine zvigaro zvisere (zvigadzirwa) pane peji rine Google Ad pasi peimwe neimwe, ini handifunge kuti ndiri kutyora mutemo wavo.
Ndakaona mimwe mitemo yekare kwayakataura 4 pa peji - asi izvo zvinoita kunge zvakaenda kare. Zvichida nekuda kwemamiriro akadai. Inonakidza! Ini ndinoonawo kuti dzimwe nguva kushambadza kuri kwete inogadzirwa nechinyorwa - ndinoshamisika kana vaine zvemukati manejimendi maitiro akavakirwa mukati.
Kukadzi 20, 2007 na1: 53 PM
ah Zvakanaka, saka ndaive neruzivo rwekare mumusoro mangu, ndatenda nekugadziriswa.
Apr 8, 2007 pa 2: 52 PM
Mhoro, dzoka zvakare. Kutenda nee-mail yako, ruregerero mukutora nguva yakareba kuti upindure.
Chikumbiro chimwe chete, uye zvipembenene zviviri.
Huye mabugs anogona kunge ari pasi kudingindira rangu, handina chokwadi…
1 - Zvingave zvichikwanisika here kuchinjisa kuwanda kwemashambadziro akaiswa pakati pezvakatumirwa - ndinonzwa kuti iye zvino ndine ma ads akawandisa pane yangu saiti:> Ini pakutanga ndakafunga nezve mukana wekusimbisa izvi pane zvisinganzwisisike uye kunyange zvakaverengerwa zvinyorwa, asi ini ndakazoona kuti nhamba dzeposvo dzisina posvo dzakabatanidzwa hadzina kuzoshandiswa zvakare muWP. Semuenzaniso, iwe unonyora dhizaini, tumira zvimwe zvishoma zvinyowani, wobva wadzima iyo dhizaini. Kunze kwekunge paine chimwe chikonzero cheangu positi #s isingaenderane, iwe unozopedzisira nekuteedzana senge 431,433,434. Haisi chokwadi chekuti zvingave nyore sei kuita POST_AD_POST_POST_AD_POST_POST mhando yemarongerwo, chero pfungwa?
2 - (CHETE) Kana uchitarisa kune zvinyoreso kuburikidza nekudzvanya pane angu Mapato, kazhinji kodhi yekushambadzira haina kududzirwa - izvi zvinongoita kunge zvinoitika pane pfupi mapositi Semuenzaniso, kana iwe ukaenda kune yangu saiti uye tinya pane Mifananidzo zvikamu, iwo matatu ekutanga mbiru anoratidza kodhi, kwete izvo zvinobuda.
3 - Inoita seisingashande kana uchikumbira kushambadza muchikamu chetsoka.
Sezvandareva, idzi nyaya dzinogona kunge dziri pasi penyaya yandiri kushandisa (Anaconda, tarisa saiti yangu kuti uwane chinongedzo), ini ndanga ndichingotarisira kuwana yako yekuisa pane izvi kana iwe wawana kanguva…
Apr 12, 2007 pa 12: 13 AM
Ini ndaifanirwa kutora pasi pe-posvo kushambadzira, sevanoverengeka vevaverengi vange vataura nezvechitarisiko chemapfupi machira kana achionekwa kuburikidza nechikwata chinongedzo.
Kana iwe ukaitika kuti uwane 5/10 maminitsi akasara, iwe unogona kundibata, uye ini ndinofara kuisa zvakare kodhi, kana iwe uchida kutsvaga nyaya yacho.
May 29, 2007 pa 3: 52 AM
Ndiri kufungidzira kuti posvo iyi haina kuongororwa kazhinji?
Ndakaedza kutarisa peji rerojekiti, asi ndikatadza kuona chikamu chemashoko, saka ndakakutumira tsamba chinguva.
Ini zvino handisi kushandisa shambadziro nenzira imwecheteyo, asi hameno kana vamwe vashandisi vangave vachiri kuwana maficha andataura pamusoro achibatsira.
May 29, 2007 pa 7: 54 AM
Ooops! Ndine urombo, Chris! Ini ndakarasa chirevo ichi nekuda kwechimwe chikonzero. Ndine huwandu hweshanduko dzandingade kuita pachirongwa, ini ndinongoda kutenderera kwadziri!
May 29, 2007 pa 11: 36 AM
np, ndinofara kuti waona zvakataurwa. Wakawana here iyo e-mail inotsanangura kuti sei pamapeji echikamu, iwo ma ads dzimwe nguva aishandiswa pasina kududzirwa? Kwete chokwadi kana ndiwo marongero aunofanira kuzviita, asi pachinzvimbo cheshambadziro, ini ndakazoona html yayo pachinzvimbo…
Kwete kukasira kukumbirwa kwandiri - ndiri kutamba nezvimwe zvinhu ini izvozvi…
Ndira 5, 2008 na3: 13 PM
Yakaburitswa PostPost 1.2.0 nhasi! Iyo inoshandisa iyo is_single basa reWordPress saka iwe unokwanisa kukwanisa kutumira chimwe chinhu pamberi kana mushure meimwe chete post peji.
Ini handigone kuita sekunge iri kushanda pablog rangu, zvakadaro. Ndiri kuverenga paWordPress rutsigiro kuti vamwe vanhu vari kunetseka ne template yavo uye iyo is_single basa. Iyo haina kutyora chero chinhu, haina chete kuratidza chero chinhu.
Ndizivise kana ichishanda kune yako blog, zvakadaro!
Mar 25, 2008 pa 6: 57 AM
Izvo hazviite (ndiri kushandisa iyo Big Blue theme). Chero mukana wekugadzirisa izvi? 🙂
Zvita 10, 2008 na3: 30 PM
Doug: yakanaka plug-in - ipfupi & yakapusa. Ndiri kushandisa default WordPress theme (v 1.6) uye iyo "Mushure mePamwe Post paPeji" sarudzo inoita kunge isiri kuratidza chero chinhu.
Wakambogadzirisa here is_single dambudziko?
Zvita 10, 2008 na3: 40 PM
Kugamuchirwa, Dr. Jim!
Handina kuona iyo ndiye_single dambudziko rakagadziriswa neWordPress panguva ino. Ndiri kutora kutora-kutora kodhi, asi ndine chokwadi chekuti plugin yakanaka.
Zvita 10, 2008 na10: 25 PM
Doug: ndatenda nekukurumidza kupindura! Saka, ndinofungidzira ndakaita basa rakashata rekubvunza mubvunzo wangu. Ndiri kuita kunge ndine dzimwe nyaya nezvekuti PostPost inoshanda sei nebhurogu yangu chaizvo neiyo imwechete post kuratidza sarudzo.
Kwete kuti zvine basa, asi blog yangu iri pa:
Zvaitaridzika kunge iwe nemupinduri (iro ishoko here?) Vanga vachikurukura dambudziko iri kumashure pakutanga kwa2008.
Yakanga iri dambudziko here panguva iyoyo? Mushure mePositi Yakatumirwa Peji shanda pane yako blog nhasi?
Ini ndinodisa kubvuma kuti ndakamedza chimwe chinhu kumusoro, asi kutanga ini ndiri kungotarisa kuti ndione kana vamwe vese vaine dambudziko rakafanana.
Ndatarisa kodhi yako uye yakanaka & yakachena, saka parizvino ndiri kupomera "is_single".
Rega ndizive zvaunofunga.
Dec 17, 2008 pa 9: 19 AM
Ndiri kuyedza kuisa PostPost plugin uye inoshanda zvikuru. Ndiri kuisa kusimudzira mushure meimwe posvo asi ndiri kuve nenyaya. Kukwidziridzwa kuri kuratidzwa muzvikamu / peji rekumba kwandakachengeta tag yakawanda. Kukwidziridzwa kunoonekwa mushure mekuverenga ZVIMWE batanidzo. Pane imwe nzira yatinogona kugadzirisa izvozvo? Kwete kuratidza mushure mekuverenga ZVIMWE batanidzo?
Vonga nekuda kwekubatsira kwako.